FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA CHINOOK - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Chinook
'Kodiac Bear dia alika tsara tokoa… ka tamin'ny volana martsa tamin'ity taona ity dia nahazo alika Chinook (Rivertrail Oz) hafa izahay. Tsy misaraka sy mpinamana be izy roa. Mifanohitra tanteraka ny toetrany: Kodi dia mitandrina amin'ny olon-tsy fantatra, milamina sy malefaka, mora fampiofanana. Oz dia saro-kenatra, te-hilelaka ny tarehin'ny olona sy ny biby rehetra hitany, feo (somary somary mangirifiry, na dia eo an-tongotrareo aza izy dia somary milomano…) ary mazoto kokoa noho ny an'i Kodi alika kely (fa mamirapiratra tokoa, ka tsy sarotra ny manazatra… mila fitoviana fotsiny). Rivo-doza Kodiac Bear (taona 22 volana) sy Rivertrail Oz (6 volana). Azonao atao ny mahita ny ruff eo amin'ny vozon'i Kodi amin'ity sary ity (sy amin'ny Oz amin'ny sary etsy ambany)… tonga lafatra mba hiarovana azy ireo amin'ny fisintomana. '
Ny Chinook dia manana endrika hozatra mifatotra izay mifanentana tsara amin'ity alika milamina ity. Mandanjalanja tsara ny vatana ny tratra dia taolana antonony lalina ary misongadina ny hozatra malefaka. Ny hoditra eo an-doha dia tery tsy misy ketrona. Ny fijanonana dia antonony ary misy lavaka mihodina mitsangana avy eo amin'ny fijanonana ka hatrany amin'ny otiput. Mahery ny vavam-bolo ary maharitra ny nify. Ny kalesin-tsofin'ilay karazan'omby, somary notsofin-drivotra sy niondrika, dia manome alika ny fahalianana sy ny fiangaviana ho an'ny alika na izany aza. Ny orona dia manana vavorona lehibe, tokony ho mainty mainty ary aseho eo amboniny kely ny vava. Mainty loko ny molotra. Ny molotra ambony dia mametaka kely ny molotra ambany ary somary matevina ny zoron'ny molotra ambany. Mihaona ny nify amin'ny kaikitry ny hety. Ny maso dia miendrika almond sy manana habe antonony, miaraka amin'ny fanehoana marani-tsaina. Maso volontsôkôlà mainty no aleony, fa ny maso maivana kokoa dia azo ekena. Ny sisin'ny maso dia feno loko mainty. Ny tongotra dia boribory lavalava, mafy orina ary matevina, miaraka amina rantsan-tongotra voahidy tsara sy matevina ary pad, misy volo matevina ary feno loko marevaka. Ny rantsan-tongotra dia voalamina ao anaty tranokala ary ny tongotra dia miforitra tsara, na dia eo anelanelan'ny rantsantongony aza. Mihodina kely ivelany ny tongotra eo aloha. Ny godclaws dia azo esorina amin'ny tongony aloha ary, raha misy, dia esorina matetika amin'ny tongony any aoriana. Ny rambony dia matevina amin'ny fotony ary manakaiky ny tendrony. Rehefa mijanona ilay alika, dia mihantona ambany ny rambony, eo ho eo amin'ny volony. Rehefa mihetsika ny alika dia entina ny rambony. Ny rambo Chinook dia tsy tratra mihitsy. Ny Chinooks dia manana palitao roa misy volo antonony. Ny akanjo ambany dia matevina, malefaka ary matevina amin'ny endriny. Mafy ny palitao ivelany ary manakaiky ny vatana ny volo. Ny palitao tsy matevina dia mahazatra amin'ny toetr'andro mafana be. Ny vozona dia feno volo, izay mamorona ruff fiarovana miaro amin'ny epron. Voafotsy tsara ny rambony, misy volo lava kokoa eo am-potony sy eo ambanin'ny rambony. Ny sisin-tongony sy ny atin'ny tongony aoriana dia arovan'ny palitao. Amin'ny loko, ny Chinook dia mangatsiaka (volom-bolamena).
Izy ireo dia natokana, miasa mafy ary mahomby amboa silety . Ny fanatanterahana ny lahasa nomena azy no ahiahin'izy ireo voalohany amin'ny fiainana. Ankoatry ny fisarihana sled, ny karazany dia azo ampiasaina amin'ny fanaovana sarety, fankatoavana, flyball, fikarohana sy famonjena ary famonosana. Ny fananganana ny alika, ampiarahina amin'ny fihetsiketsehana mailaka sy ny familiana, dia mahatonga azy io ho alika malaky. Ny iray amin'ireo toetra mampiavaka azy dia ny toetran'ny Chinook: milamina, tsy mahery setra, manana toetra tia sy tia namana. Ny Chinooks dia namboarina hiasa amin'ny ekipa ary tsy tokony hampiseho herisetra alika. Na dia eo aza ny malefaka, ny toetrany aza, dia alika mendri-kaja ny Chinook. Mifandraisa tsara hisorohana azy ireo tsy ho voatokana amin'ny olon-tsy fantatra na manodidina tsy mahazatra. Amin'ny hetsika, ny Chinook dia mahafinaritra nefa misy tanjona, mailaka nefa milamina. Ny fisehoany dia taratry ny faharanitan-tsariny ny kalesiny mirehareha dia maneho ny fahamendrehany. Ny ankamaroan'ny Chinooks dia manao biby fiompy tena tsara ho an'ny ankizy, indrindra fa rehefa ampiakarina miaraka aminy ny alika (na dia miaraka amin'ny ankizy tsy dia maditra sy mikotroka aza). Ny ankamaroan'ny Chinooks dia mandefitra amin'ny ankizy na dia mbola tsy nifandray tamin'izy ireo aza. Ireo alika ireo dia mahatoky tanteraka. Miasa tanteraka izy ireo ary tsy te hiaraka aminao fotsiny. Noho ny velarantaniny hektara sy hektara, ny alika amin'ny ankapobeny dia ho aiza na aiza no misy anao ka tsy dia ilaina izany fa manana toerana malalaka be ianao, fa mila mandray azy ireo ianao mandeha isan'andro aiza izy ireo no asiana voditongotra eo akaikinao na ao aorianao, tsy eo alohany mihitsy, toy ny mpitondra entana no mandeha aloha . Ny Chinook dia mila manakaiky ny fianakaviany sy ny ampahany amin'ny fianakaviana. Tsy manao biby fiompy any ivelany izy ireo. Ny Chinook amin'ny ankapobeny dia tsara miaraka biby fiompy tsy kaninina . Mila tompona matoky tena sy mafy orina amin'izy ireo izy ireo, saingy tsy masiaka. Raha sendra miaraka amin'izy ireo ianao dia ho mafy orina. Tokony haseho azy ireo hoe iza ilay ' amboa ambony '. Ny Chinooks dia voaofana mora amin'ny alàlan'ny fanamafisana tsara, fa aza mamaly ny tetika fampiofanana mavesatra. ny fahefana tony ao anatin'ny fomba azon'ny alika no tsara indrindra. Tena marani-tsaina izy ireo, ary tsy mila mahalala afa-tsy izay tianao hatao.
Haavony: Lehilahy 23 - 27 santimetatra (58 - 69 cm) Vehivavy 21 - 25 santimetatra (53 - 64 cm)
Milanja: salanisan'ny lehilahy 70 kilao (32 kg) eo ho eo ny vehivavy 55 pounds (25 kg)
Ireto toe-pahasalamana manaraka ireto dia nitranga tao anatin'ny karazana Chinook amin'ny ankapobeny: saro-kenatra be loatra, tsy fetezan'ny maso, dysplasia hip, olana amin'ny hoditra hormonina, cryptorchidism mono / bilateral, fanintona ary spondylosis. Amin'ny ankapobeny, ny karazany dia salama tokoa ary ireo aretina ireo dia miseho amin'ny ampahany kely amin'ny mponina. Miasa mafy ny mpiompy mba hijery ny alika misy aretina voalaza etsy ambony, ary ny mpividy dia tokony hanao izay hahazoana antoka fa ny ray aman-drenin'ny alika kely dia voamarina fa tsy misy areti-maso sy andilany.
Chinooks dia manao alika fonenana tsara raha mbola manolo-tena amin'ny fanaovana fanatanjahan-tena sy mandeha matetika ny tompony. Tsy mivoraka matetika izy ireo ary azo avela azo antoka aorian'ny puppy mandritra ny fotoana maharitra. Tsy toy ny namany any avaratra ireo alika ireo, fa tsy manamboatra biby fiompy tsara any ivelany. Saro-piaro loatra amin'ny fihetsem-po izy ireo, ary ny fisarahana amin'ny fifandraisan'olombelona dia miteraka fanahiana amin'ny fisarahana sy korontana ara-pihetseham-po hafa. Ireo alika ireo dia tsy tokony hotehirizina ao ambadiky ny trano ary tokony hoheverina ho anisan'ny fianakaviana foana.
Ny Chinooks dia mila fanatanjahan-tena antonony ary tsy alika hyper, fa tokony horaisina a mandeha isan'andro . Raha vantany vao vita ny fampihetseham-batana, dia hampiala voly ny alika na hiala sasatra.
Ny palitaon'ny Chinook dia mikarakara ny tenany ary tsy mila fikarakarana kely. Ny Chinooks dia manana palitao roa sosona misy akanjo lava matevina ary akanjo lava. Ny tompona Chinook sasany dia nitatitra ny alikan'izy ireo nilatsaka indroa isan-taona nandritra ny herinandro teo ho eo raha tsy izany, kely dia kely no nalatsany. Ny sasany kosa nitatitra ny alikany fa handraraka be mandritra ny taona. Nilaza ny tompona iray hoe: 'Kodi dia mandatsaka fatratra mandritra ny herintaona (na eo aza ny fanosorana ny palitao mahazatra). Oz koa dia mpandatsa-na dia tsy dia lehibe lavitra noho i Kodi aza. Heveriko fa izay manana Chinook dia tokony ho vonona amin'ny volon'alika ao an-trano. '
anglisy mastiff sy rottweiler mix
Ny Chinook dia karazany Avaratra iray nalaina tamina razambe iray. Ny rain'ny karazany, Chinook, dia teraka tamin'ny mpanoratra / mpikaroka an'i Arthur Walden's Wonalancet, toeram-pambolena any New Hampshire tamin'ny 1917. Izy dia iray tamin'ireo zaza telo nateraky ny vavy 'Northern Husky', notarihin'ny iray tamin'ireo alika tao amin'ny ekipan'ny Pole Avaratra an'i Peary . Ny vadin'i Chinook dia alika lehibe mifangaro. Chinook dia 'fanatanjahantena,' tranga natiora, tsy nitovy tamin'ny ray aman-dreniny. Alika kambana miavaka izy ary niaraka tamin'ny dian'ny Pole atsimo an'ny Admiral Byrd tamin'ny taona 1927. Ny zanak'i Chinook, izay nandova ny fandokoany, ny habeny ary ny toetrany amin'ny ankapobeny, dia nompiana mba hanambatra ny herin'ilay alika mpitatitra entana lehibe sy ny hafainganan'ny alika kely. Tany am-piandohan'ny taona 1900, ny Chinook dia nametraka firaketana ho an'ny rakotra halavirana, enta-mavesatra entina ary mandeha ny fotoana. Ity karazana ity dia nitombo nandritra ny taona maro tamina mpiompy nanolo-tena vitsivitsy. Ny Chinook dia karazany tsy fahita firy. Ny Guinness Book of World Records dia nanisy lisitra ny Chinook ho alika tsy fahita manerantany tamin'ny 1966 raha 125 fotsiny no nisy. Ny Chinook taloha dia alika sled miavaka, fa tamin'ny 1980 dia saika ny karazany lany tamingana , ambiny 12 sisa azo avela eto amin'izao tontolo izao. Mihena be ny fivezivezin'izy ireo. Izy ireo dia alika mpiara-miasa betsaka kokoa izay afaka manao asa isan-karazany, fa tena tia milomano, manao sarin-tsarimihetsika ary manao sarety. Hain'izy ireo manokana ny manao sarety satria, tsy toy ny namany Siberia sy Alaska, dia mora zatra amin'ny fankatoavana izy ireo ary afaka miasa milamina tsara amin'ny fampiasa. Miasa ny mpanafika hahazo fankasitrahana bebe kokoa ary mikely aina mikaroka sledder hiara-miasa amin'ireo mpiompy amin'ny programa izay manasongadina ny kalitaon'ny asa. Ny Chinook dia neken'ny United Kennel Club tamin'ny volana martsa 1991. Ny United Kennel Club dia niara-niasa tamin'ny COA (Chinook Owners Association) mba hamolavola programa fiompiana, izay mampiasa alika tany am-boalohany ho an'ny karazany mba hamoronana fahasamihafana sy fahasalamana bebe kokoa ao amin'ny dobo filokana. . Misy ny fizotran'ny fampiharana, torolàlana henjana ary komity hanara-maso ny programa manontolo. Amin'ny faran'ny programa, ny alika dia hahazo alalana amin'ny fisoratana anarana madio ao UKC. Amin'ny hetsika tsy mbola nisy toa azy, ny UKC koa dia mamela ny Chinook Crosses totohondry hosoratana amin'ny LP. (Ny alika tsy madio tsy misy fangarony na voaroaka no afaka misoratra anarana ao amin'ny UKC.) Ny Chinooks New England Club dia iray amin'ireo klioban'ny Affiliate COA. Miasa mafy ihany koa izy ireo amin'ny fitehirizana ny karazany.
pitbull amin'ny 6 volana
CWNBC = Chinooks Maneran-tany - National Breed Club
FORB = Fiombonamben'ny firazanana tsy fahita firy
Rivo-doza Kodiac mitondra ny Chinook amin'ny faha-13 volana
Rivo-doza Kodiac Mitondra ny Chinook amin'ny 13 volana amin'ny oram-panala
GreatMountain Team Mankany 2000! Chinooks ary Husky iray, GO TEAM GO !! Sary natolotry ny Greatmountain Chinooks
CH WoodsRunner Allagash Springs TT, sary nahazoana alàlana avy amin'i Greatmountain Chinooks
Rivo-doza Kodiac Mitondra ny Chinook toy ny alika kely mipetraka amin'ny lanezy
Kodiac, rivo-doza mitondra ny Chinook ho alika kely
'Ity no Trip, Chinook roa taona. Alika alika goavambe tokoa izy. Voaofana amin'ny skijor izy ary tsy azonao kitihina akory ny kitapo ski raha tsy mitsambikina noho ny hafaliana izy! Nampiofaninay izy mifototra amin'ny teknikan'i Cesar Millan (fampihetseham-batana, fifehezana, fitiavana) ary ny fitsangatsanganana dia hita ho alika mahay mandanjalanja sy mahafinaritra. Ny hetsika tiany indrindra dia ny filalaovana fetia, fanaovana sary an-tsehatra, mandeha mitaingina bisikileta ary fitsangatsanganana any amin'ny zaridaina alika . Ny fomba fiasan'i Cesar, raha ampiharina tsara, dia tena mandaitra, efa hitako tamin'ny zavatra niainako izany. '
Tsidiho ny Chinook maka hatory kely eo am-pandriana
'Ity i Tory the Chinook. Fohy ho an'ny 'Fandresena Fandresena.' Nahazo ny anarany izy satria narary toy ny alika kely ary efa ho faty. Saingy sambatra sy salama i Tory ankehitriny, ny tompony dia 'mirehareha miantso azy hoe ahy!' '
Tory Chinook mandeha mamaky ny ahitra.
Hijery ohatra hafa momba ny Chinook
Sary Chinook 1
yorkshire terrier mifangaro chihuahua
alika omby aostraliana mena mena
vidin'ny fandidiana alika kely amin'ny lanilany